B2B (ईमेल) मेसेन्जरलाई दोष नदिनुहोस् Martech Zone
हाम्रो एक ग्राहकले आज उनीहरूलाई प्रयोग गरिरहेको सेवाको बन्द कुनै अर्को ईमेल सेवा प्रदायकमा सर्नुपर्दछ भने। हामीले किन सोध्यौ र उनीहरूले भने कि उनीहरूले ११% प्राप्त गरे कडा बाउन्स उनीहरूले पठाएका ईमेलहरूमा दर दिनुहोस्। उनीहरूले सोचे कि प्रणाली बिग्रिएको छ किनकी उनीहरूले प्रमाणित गरे कि केही ईमेल ठेगानाहरू जुन त्यहाँ बताइएको छ कि त्यहाँ हार्ड बाउन्स कम्पनीमा सक्रिय प्राप्तकर्ताहरू थिए।
सामान्य परिदृश्यहरूमा,aउच्च बाउन्स दर केहि भौं बढाउन सक्छ। यस अवस्थामा पनि हामी ग्राहकलाई उनीहरूको ईमेल सेवा प्रदायकमा उद्धार टीमसँग कुरा गर्न प्रोत्साहन दिइरहेका छौं। यद्यपि यो तपाईको विशिष्ट कम्पनी होईन - यो एक कम्पनी हो जसले B2B फिल्डमा काम गर्दछ र तिनीहरूको ग्राहक सूचिको ईमेल ठेगानाहरू तपाईको औसत जीमेल वा अन्य प्राप्तकर्ताहरू होइनन्। तिनीहरू ठूला निगमहरू हुन् जुन उनीहरूको मेल आन्तरिक प्रबन्ध गर्दछ।
र यस अवस्थामा ईमेल सेवा प्रदायकको राम्रो छुटकाराको लागि उत्कृष्ट प्रतिष्ठा छ। त्यसोभए यो शful्कास्पद छ कि त्यहाँ प्रेषकसँग आईपी प्रतिष्ठाको समस्या छ।
यो परिदृश्य B2C ईमेल वितरणयोग्य भन्दा फरक छ। किनभने स्प्यामको भोल्युम कर्पोरेट मेल एक्सचेन्जहरूमा प्रवाहित भएको छ, विशाल आईटी डिपार्टमेन्टहरू छन् डिप्लोयड उपकरणहरू वा सेवाहरू स्प्याम अस्वीकार गर्न। उपभोक्ता प्रणाली प्राय: प्रेषकको सन्देश, सन्देश र जंक फिल्टर क्लिकको खण्डमा निर्भर गर्दछ कि जंक फोल्डरमा ईमेल पठाउने वा नगर्ने। र त्यसो भए पनि, ईमेल बाउन्स छैन - यो डेलिभर भएको छ ... केवल रद्दी फोल्डरमा। व्यापार प्रणालीसँग रद्दीटोकरी फोल्डर पनि नहुन सक्छ वा उनीहरूले ईमेल बाउन्स गर्न सक्दछन् र तिनीहरूलाई कहिले पनि भित्र नपर्न!
एक B2C ईमेल अझै डेलिभर हुनेछ, तर जंक फोल्डरमा पठाउन सकिन्छ। A B2B ईमेल; जे होस्, पूर्ण रूपमा अस्वीकृत हुन सक्छ। सेवा वा उपकरणमा निर्भर गर्दै उनीहरूले स्प्याम ब्लक गर्न प्रयोग गरिरहेका छन्, साथ साथै उनीहरूले कन्फिगर गरेका सेटि settingsहरूको साथ, ईमेलहरू प्रेषकको आईपी ठेगाना र प्रतिष्ठाको आधारमा खारेज गर्न सकिन्छ, यसलाई सामग्रीको लागि अस्वीकृत गर्न सकिन्छ, वा यसलाई अस्वीकार पनि गर्न सकिन्छ। केवल किनभने एकल प्रेषकबाट ईमेलको गति र खण्ड।
B2C परिदृश्यमा, ईमेल शारीरिक रूपमा प्रेषकलाई ईमेलमा प्राप्त भएको प्रतिक्रियाको साथ स्वीकार गरियो। B2B परिदृश्यमा, केहि प्रणालीहरूले केवल ईमेल पूर्ण रूपमा बाउन्स गर्दछ रaको गलत त्रुटि कोड प्रदान गर्दछ कडा बाउन्स.
अर्को शब्दहरुमा, B2B कम्पनीको उपकरणले हार्ड बाउन्स कोडको साथ ईमेल फिर्ता अस्वीकार गर्दछ कि ईमेल ठेगाना पनी अवस्थित छैन (यद्यपि यो हुन सक्छ)। यो, व्यवसाय मा पाइने कारोबार संग मिलेर, एक B2B अभियान को कडा बाउन्स दरहरु औसत B2C अभियान भन्दा ठ्याक्कै माथि उठाउन सक्छ। यो विशिष्ट ग्राहक एक टेक्नोलोजी ग्राहक पनि हो - त्यसैले उनीहरूका प्रापकहरू सुरक्षा हुन् र IT मान्छेहरू ... मानिस जसले सुरक्षा सुरक्षा कुनै पनि अधिकतम गर्न मन पराउँछन्।
दिनको अन्तमा, ईमेल सेवा प्रदायक झूठो छ ... तिनीहरूले केवल कोड रिपोर्ट गर्छन् जुन प्राप्तकर्ताको मेल सर्भरबाट फिर्ता पठाइएको थियो। जबकि थोक ईमेल सेवाहरूको आईपी प्रतिष्ठामा मुद्दाहरू हुन सक्छन् (जुन तपाईं सजिलैसँग २ 250०ok मार्फत निगरानी गर्न सक्नुहुनेछ), यस अवस्थामा प्राप्तकर्ताहरूको सानो तर लक्षित सूची मेरो लागि मुद्दा जस्तो देखिन्छ। हाम्रो ग्राहकलाई हाम्रो सन्देश:
मेसेन्जरलाई दोष नदिनुहोस्!
यदि तपाईं ईमेल सेवा प्रदायक वा बल्क ईमेल प्रेषक हुनुहुन्छ र तपाईंको आईपी प्रतिष्ठा, समस्या निवारण मुद्दाहरू निवारण गर्न, वा तपाईंको वास्तविक इनबक्स प्लेसमेन्ट मापन गर्न चाहनुहुन्छ भने, डेमो गर्न नबिर्सिनुहोस्। 250okप्लेटफर्म। हामी तिनीहरूसँग साझेदार छौं।
टैग: b2b बाउन्स दरईमेल वितरणयोग्यताकडा बाउन्स
दारा शुलेनबर्ग (@dschulenberg)
मई 13, 2015 मा 5: 13 PM
पूर्ण रूपमा तपाइँको ग्राहकलाई तपाइँको प्रतिक्रिया प्राप्त गर्नुहोस्, तर तपाइँले परिणाममा तिनीहरूलाई के गर्न सल्लाह गर्नुभयो?
मई 13, 2015 मा 8: 20 PM
नमस्ते दारा! ठूलो प्रश्न, म यो समावेश गरेको हुनुपर्दछ!
उनीहरूको ईमेल प्रदायकले प्रमाणित गर्नुहोस् कि त्यहाँ छुट्याउने कुनै समस्या छैन र यदि त्यहाँ छन् भने तिनीहरूलाई सुधार्नुहोस्।
वैध ईमेल ठेगानाहरूका साथ ग्राहकहरूसँग सम्पर्क गर्नुहोस् र उनीहरूको आईटी टोलीले किन ईमेलहरू अस्वीकृत भइरहेका छन् पत्ता लगाउनुहोस्।
मान्यता दिनुहोस् कि त्यहाँ B2B मा टर्नओभरको एक टन छ र गाह्रो समस्याहरू जुन समाधान गर्न सकिँदैन। पठाउन जारी राख्नुहोस् र जब कुनै मुद्दा आउँछ तब स्थिर रहनुहोस्।